jinsi iyo porno Abaalmarinta Abaalmarinta: Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Relationships Wasmo & Wasmo
Erayga Pornography wuxuu ka yimid erayada Giriigga ah "porno" iyo "graphie" oo macnaheedu yahay "qoraallada ama ku saabsan dhilleysiga".
Pornography sida kicinta ayaa jidhka si toos ah ugu galaa dareennada, inta badan indhaha iyo dhegaha. Waxay leedahay xiriir toos ah nidaamka dareenka dhexe, gaar ahaan nidaamka abaal-marinta ama xarunta raaxada ee maskaxda. Waxay bixisaa dabeecad degdeg ah galmo. Isbeddelka nafsaaniga ah wuxuu keenaa isla markiiba dhacdada: garaaca wadnaha si deg deg ah; neefsashadu waxay noqotaa mid kobcinaysa, ilaaliyuhuna wuxuu bilaabmaa inuu dareemo in uu ku dhaco xubinta taranka.
Pornography maanta via internetka wuu ka duwan yahay filimmo hore ee. Sawirada muuqaalka ah ee majaladaha majaladaha ama xitaa filimada buluugga ah ma laha saameynta maskaxda ee maanta oo ah bixinta aan dhammaadka lahayn ee filimka, fiidiyowyada ficil-qabashada leh. Dabeecadda isdhexgalka ee internetku waxay u oggolaaneysaa dadka in ay si sahlan u bedelaan waxyaabo badan oo soo jiidasho leh sida ugu dhakhsaha badan markay ku caajisaan qiimaha hadda. Maadaama ay dadku daawadaan waxyaabo badan oo porno ah, maskaxdooda ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabaan inay soo saaraan wax yar dopamine jawaab ahaan. Tani waxay keenaysaa rabitaan yar oo ku saabsan waxa ay daawanayaan. Si kastaba ha ahaatee waxay ku soo celin karaan dheelitirka dopamine iyagoo daawanaya fiidiyowyo badan oo naxdin leh. Kuwani waxay isla markiiba keenaan 'duufaan' ah oo waaweyn 'dopamine'.
Jidhku wuxuu jecel yahay dheelitir. Marka aan helno cunto ku filan, cabitaan ama jinsi calaamado maskaxeed ayaa waxaa ku filan. Tilmaame-galkaan wuxuu naga caawiyaa inaan joojino cunno, cabbitaanka ama galmo si aan wax uga qabano hawlaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolol maalmeedka. Laakiin markaan 'foorarin' ku yeelanno walax ama habdhaqan, habka satalaytiga ayaa si ku meel gaar ah loo hirgelin karaa, oo laga gooyo helitaanka dhiirigelinta ilkaha. Si kale haddii loo dhigo, maskaxdeenna waxay tarjumayaan jibbaarada abaalmarinta 'baahida badbaadada' waxayna u oggolaanaysaa inaan sii wadno inaanu si ku meel gaar ah u niyadjabno. Ka dhig dharka ka hor inta suunka qaboobaha jiilaalka, waxa la liqin karaa salmon 20 iyada oo aan xanuunsanayn.
Dumar badan oo qaangaar ah ayaa maanta isticmaala porno waxbarasho ku saabsan jinsiga iyo xiisaha. Waxay caadi ahaan daawadaan keligaa. Hawlgalkan hufan ee jinsiga ah wuxuu jimicsi u sameeyaa maskaxdooda xasaasiga ah wakhti si uu u helo rajo cusub. Waxay u horseedi kartaa horumarinta fetishes, isbeddel aan la filaynin ee dhadhanka jinsiga iyo takoorka qaar. Tani waxay sidoo kale khusaysaa dadka qaangaarka ah, oo intooda badani bilaabay daawashada porn ka hor inta aaney qaan-gaarin. Qaabkan tababarka maskaxdu wuxuu ka hortagayaa ilaaliyaha faa'iidooyinka caafimaadka, horumarka shakhsi ahaaneed iyo waxyaabo badan oo raaxo leh ee xiriirka jinsiga dhabta ah.
Ragga badan oo kufilma daroogada ayaa sidaas samaynaya iyagoo 'rogaya' fiidiyo kasta oo cusub, taas oo ku dhawaad ​​ku dhow daaqada by masturbation laakiin aan ahayn. Tani waxay u ogolaaneysaa inay dhexgalaan sawirrada galmada ee saacadaha iyo saacadaha. Isticmaalayaasha ayaa had iyo goor raadinaya sawirkaas oo dhammaystiran si loo dhammeeyo. Kuma dareemaan inay iibinayaan iyagoo laga yaabo inay sameeyaan haddii ay galmo la yeesheen lamaane iyo inay gaaraan dabaasha.
Filimmada qaawan ee internetka waxay la mid tahay xilliyada isweheshiga, laakiin xilli gogol dhaaf ah oo aan dhammaanayn. Maskaxdii hore waxay u aragtaa inay tahay 'jahwareer quudin', oo ah fursad bacarimis oo aad u ballaaran waxayna damineysaa farsamada dherjinta. Maskaxdu markaa waxay dooneysaa inay laqabsato tan weligeed kahor bonanza khibrad leh - jaallayaal aan dhammaad lahayn oo raba inay bacrimiyaan kuwa aan ku muujin karno rabitaankeena galmada.
Iyada oo la adeegsanayo isticmaalka jacaylka galmada ee internetka waxaa loola dhaqmaa shisheeyaha faa'iidadooda iyo dhibkeena. Isticmaalka badan ee lebbiska internetka ayaa si gaar ah u waxyeelleeya dhallinyarada, kuwaas oo maskaxdooda ay kufilan yihiin barashada galmada sida diyaarinta qaangaarnimada. Waxay baranayaan in ay maskaxdooda ku xereeyaan alaabo macmal ah. Halkii aad ku baran lahayd sida loola hadlo, u ilaalinta isha-isha, waxay xoojisaa ixtiraamka iyo taabashada jacaylka ama jinsiga ah ee la-hawlgalayaasha dhabta ah ee dhabta ah, dadku waxay xoojiyaan dariiqooyinka abaalmarinta la soo saaro.
Yaraynta Rabitaanka Galmada